သွားတွေကျိုးနေပြီ "မာန်စွယ်" တွေမကျိုးသေးဘူးလား?
အရေတွေတွန့်နေပြီ "အကုသိုလ်" အလုပ်တွေမတွန့်သေးဘူးလား?
အသားတွေလျှော့နေပြီ "တဏှာဆန္ဒ" တွေမလျှော့သေးဘူးလား?
ဆံပင်တွေဖြူနေပြီ "စိတ်ထား" တွေမဖြူသေးဘူးလား?
မျက်စိတွေမှုန်နေပြီ "နိဗ္ဗာန်" သွားမယ့်လမ်းမှုန်တုန်းပဲလား?(မြေဇင်းဆရာတော်)
အိုရာက နာရာမရောက်ခင် ၀ိပဿနာ လုပ်ပါ။
အလုပ်ကြည့်ချင်ရင် ခန္ဓာကြည့်၊ အလုပ်စဉ်ကြည့်ချင်ရင် မှတ်တမ်းကြည့်။ သညာသိနဲ့ "နိဗ္ဗာန်" မရောက်နိုင်ပါ။ ပညာသိမှ "နိဗ္ဗာန်" ရောက်မည်။ (မိုးကုတ်ဆရာတော်)
Posted by ပန်းဗေဒါ at 10:57